Apple Inoburitsa Security Yekuvandudza '2017-001' yeOS X Yosemite uye El Capitan | Ndinobva mac
Apple Inoburitsa '2017-001' Kuchengetedzwa Kwekuvandudza kweOS X Yosemite uye El Capitan
Nezuro yaive yekuvandudza zuva kuApple. Uye ndezvekuti isu tanga tiine nemabeta shanduro dzeOS dzakasiyana kwemavhiki mazhinji uye nezuro chete masikati ese ekupedzisira shanduro dzeMacOS Sierra, iOS, watchOS uye tvOS dzakaburitswa. Asi pamusoro peaya mavhezheni matsva eOS, hofisi yeApple suite yakagadziridzwa zvakare uye sezvatinogona kuona mumusoro wenyaya ino, a Chengetedzo Gadziridza '2017-001' yeOS X Yosemite uye El Capitan. Iyi yekuvandudza yekuchengetedza inowanikwa sedzimwe shanduro dzeMac kubva kuMac App Store uye kumisikidza kunokurudzirwa kune vese vashandisi vanogara pane idzi shanduro.
Apple haikwikwidzi nezvekuwedzera kwakakosha kana shanduko kune mashandiro eOS X Yosemite uye OS X El Capitan masisitimu, inongowedzera zvinowedzera zvekuchengetedza kana zvigadziriso kwavari. Chaizvoizvo chinhu chega chinotsanangurwa nekambani yeCupertino mumanotsi eichi chiitiko ndeye yekuchengetedza vhezheni nhamba uye hapana chimwe chinhu: «Chengetedzo Gadziridza 2017-001 inokurudzirwa kune vese vashandisi uye inovandudza chengetedzo yeOS X »
Zvine musoro kuti tikurudzire iyo yekuvandudza kune vese avo vasingakwanise kugadzirisa yavo yekushandisa system kune yazvino vhezheni yeMacOS Sierra 10.12.4 chero zvikonzero. Apple yakamira kuburitsa vhezheni nyowani nekuvandudza kweaya OS X Yosemite uye El Capitan nguva yadarika, ikozvino inongoburitsa zvidzoreso zvekuchengetedza kugadzirisa mabugs kana kukundikana kwesystem. Kuti utore pasi nyowani yekuchengetedza yekuvandudza isu tinongofanirwa kuisa iyo Mac App Store uye pane iyo yekuvandudza tebhu isu tichawana iyi yekuvandudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » OS X El Capitan » Apple Inoburitsa '2017-001' Kuchengetedzwa Kwekuvandudza kweOS X Yosemite uye El Capitan
Unyengeri kunyora atypical madudziro uye tsamba paMac nekukurumidza
Hausi kuwana iyo Night Shift chimiro pane yako Mac? Hausiwe woga